होटल तथा रेष्टुरेन्ट बेलुका ८ बजेपछि बन्द गर्नु पर्ने : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks होटल तथा रेष्टुरेन्ट बेलुका ८ बजेपछि बन्द गर्नु पर्ने
होटल तथा रेष्टुरेन्ट बेलुका ८ बजेपछि बन्द गर्नु पर्ने
काठमाडाैं । सरकारले होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउने नियम ल्याएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना महामारी रोकथामका लागि आदेश जारी गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । बेलुका ८ बजेपछि होम डेलिभरी मात्र गर्न पाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए ।
विदेशबाट फर्किएर स्वरोजगार बन्दै स्थानीय युवा
इलाम । वैदेशिक रोजगारीकालागि विदेश पुगेर फर्र्किएका इलामको माई नगरपालिका–१० का धनपति दुलाल अहिले गाउँमौ बाख्रापालन गर्दैछन् । वैदेशीक रोजगारी गुमाएर फर्किएका दुलालले ‘सामाजिक...
लुम्बिनीमा एमाले सांसद पाण्डेले दिए राजीनामा
वुटवल । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गानारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पाण्डेले सभामुखसामु राजीनामा बुझाएका हुन् । कपिलबस्तु...
वैकल्पिक सिकाईलाई सरकारको मान्यता
काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक विधिबाट भएको पठनपाठन शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने प्रक्रियालाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - January 11, 2021 0
प्रहरी गुहारिन् सोनक्षीले
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - August 24, 2020 0
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले सामाजिक सञ्जाल छाड्दा पनि घोचपेज सहनुपरेको छ । यसैक्रममा आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा जवाभावी लेख्नेलाई उनले प्रहरी हिरासतमा पु-याएकी...
यस्तो छ बर्डफ्लु संक्रमणबाट जोगाउने योजना
अर्थ राजधानी समाचारदाता - February 2, 2021 0
काठमाडौँ । सरकारले बर्डफ्लु रोग संक्रमण फैलिन नदिन उच्च सतर्कत अपनाएको छ । शुक्रबार काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको ७ साङ्लेखोला, फुटुङका स्थानीय कृषकहरूले पालेका टर्की...
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली किन उपस्थित भएनन ?
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 27, 2020 0
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटीको चालु बैठकमा बोल्ने नेताहरूले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न सरकारले थालेको प्रयास प्रशंसनीय भएको भन्दै भारतसँग प्रभावकारी वार्ता...
काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा)को नयाँ वरीयतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ । फिफाले बिहीबार निकालेको नयाँ वरीयतामा नेपाल यथास्थान १७०औं...
गच्छेदारले विशेष अदालतलाई किन टेरेनन् ?
Exclusive राजधानी समाचारदाता - October 12, 2020 0
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छेदारले विशेष अदालतले अदालतमा उपस्थित हुन जारी गरेको म्यादमा उपस्थित हुन अस्वीकार...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - February 20, 2021 0
प्रदेश ३ राजधानी संवाददाता - March 17, 2021 0
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा तीन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । कांग्रेस सांसदले मंगलबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दुई जरुरी सार्वजनिक महत्वका...
एजेन्सी - May 5, 2021